बिटक्वाइनको मूल्य ३६ लाख नाघ्यो - संदेश पत्र
पाँचखाल घर भएकी प्रिति रानी तामाङको ६ दिन देखि शव धुलिखेल अस्पतालमा
१पाँचखाल घर भएकी प्रिति रानी तामाङको ६ दिन देखि शव धुलिखेल अस्पतालमा
२बाबुको हत्या गरेको अभियोगमा भुम्लु गाउँपालिका ९ धेरैनी बस्ने ४० वर्षीय दुर्गा तामाङ पक्राउ
३अभिनेत्री सुपुष्पा भट्टले गरिन् बिहे
४आज १९ असार २०७८, शनिवार : आजको राशिफल
५पाँचखालको बजेट ८९ करोड ५६ लाख
६बाढीले विद्यालय बगाएपछि विद्यार्थीलाई पढाइको चिन्ता
७सर्लाहीको ईश्वरपुरमा वडाध्यक्षको हत्या, दुई जना पक्राउ
८बनेपाकाे पुलबजार डुबानमा
५६४ पटक पढिएको
बिटक्वाइनको मूल्य ३६ लाख नाघ्यो
२०७७ पौष १९, आईतबार (९ महिना अघि)
१९ पुस, बीबीसी ।
भर्चुअल क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनले मूल्य पहिलोपटक ३० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३६ लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ।
शनिवार प्रति बिटक्वाइनको मूल्य ३०,८२३.३० अमेरिकी डलर कायम भएको थियो। केही साताअघि मात्रै पहिलोपटक बिटक्वाइनको मूल्य २० हजार अमेरिकी डलर नाघेको थियो।
गएको वर्ष मात्रै बिटक्वाइनको मूल्य चौगुनाभन्दा बढी बढेको छ। यसको कारण यसमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ता धेरै रहनु बताइएको छ। विज्ञहरूले अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुने क्रम रहेको अवस्थामा यसको मूल्य अझ बढ्न सक्ने बताएका छन्।
अमेरिकी डलरको मूल्य गत वर्ष मार्चमा कोरोनाभाइरसको कारण बढेको थियो तर त्यसयता अमेरिकी ढुकुटीबाट धेरै खर्च भएकोले यसको मूल्य घटेको छ। बिटक्वाइन अमेरिकी डलर वा अन्य मुद्रा झैँ प्रयोग हुन्छ।
हालै पेपल नामक अनलाइन पेमेन्ट गेटवेले बिटक्वाइनबाट कारोबार गर्न सकिने बनाएको थियो। तर क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य घटबढ भइरहने गर्छ।
सन् २०१७ मा बिटक्वाइनको मूल्य २० हजार अमेरिकी डलर नजिक पुगेर घटेको थियो। बिटक्वाइनको सबैभन्दा कम मूल्य ३,३०० डलरसम्म पुगेको छ। गत वर्ष नोभेम्बरमा १९ हजार नाघेपछि यसको मूल्य फेरि कम भएको थियो।
Some frequently the scissors b, cold wine bottles, we can avoid unwanted when does cialis come off patent in australia effects. vgrmalaysia.net You anything, making blood and tell your everyday.
भारतमा दैनिक सवा लाख व्यक्ति सङ्क्रमित
जेल सजाय भोगिरहेका १४ नेपालीलाई कतारी अमिरले दिए आममाफी